August 4, 2021 - Babal Khabar
Aug42021 by EditorNo Comments
‘मेयर होओस् त रेनु दाहालजस्तो’ देश विदेश बाट बधाई को ओइरो काठमाडौं : जतिबेला माओवादी केन्द्रले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, महिला नेतृ रेनु दाहाललाई भरतपुर महानगरको प्रमुखका रूपमा अघि सार्ने निर्णय गर्‍यो, विरोधी कित्ताबाट मात्र नभएर पार्टीभित्रकै कैयौं नेताहरूले पार्टी निर्णयमाथि अनेकौं टिकाटिप्पणीहरू गरे। आफ्नो जीवनको किशोरावस्थादेखि लगातार माओवादी आन्दोलनमा सक्रिय रेनुलाई पार्टी नेतृत्वको छोरीका रूपमा चित्रण मात्र गरिएन, उनले भरतपुरमा केही गर्न नसक्ने भविष्यवाणिसमेत गरियो। चुनावी दौरानसम्म पुग्दा विरोधीहरूले अनेकौं कुप्रचारद्वारा उनको विजयलाई रोक्ने प्रयास गरे। तर, जनमतको बलमा ती सबै प्रयासहरू किनारा लागे। संघीय प्रणालीको अभ्यासपूर्व चितवनलाई ७६ औं जिल्ला भनिन्थ्यो, जहाँ देशैभरिको जनसंख्या, भाषा, संस्कृति, सभ्यता र मनोविज्ञानको संकेन्द्रण हुँदै आएको छ। यस्तो विविधतायुक्त र अनेकौं चुनौत
मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी पुरा पढ्नुहोस धर्मशास्त्रमा शुभ र अशुभ विषय बारे उल्लेख गरिएको पाउन सकिन्छ।अहिलेको वैज्ञानिक युगमा यस्ता कुराहरुमा विश्वास नगर्नेको संख्या उल्लेख्य छ तर केहीले भने यस्ता कुरुालाई सही मान्छ जिवनमा विभिन्न कालखण्डमा आउने विभिन्न संकेतले शुभ र अशुभ कुराबारे जानकारी दिने धर्म शास्त्रहरुमा उल्लेख गरिएको छ त्यस्ता संकेतमा भविष्यमा हुने घटना परिघटनाका बारेमा सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ।यस्तै खालका संकेतकामा सपना पनि एक माध्ययम हो । यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला केही संकेत यस्ता हुन्छन जसले हामीलाई धन प्राप्त हुने बारेमा पहिले नै बताई दिन्छन् ।त्यस्ता संकेतलाई सम्झनु आवश्यकता हुन्छ । त्यस्ता संकेतमा भविष्यमा हुने घटना परिघटनाका बारेमा सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ।यस्तै खालका संकेतकामा सपना पनि एक माध्ययम हो । यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल
प्रेम गर्ने हो या प्रेम हुने भन्ने दुई किसिमको हुन्छ । अरुको लागि गरेको प्रेम अल्पकालीन खालको हुन्छ । जबर्जस्ती गरेको प्रेम अल्पकालीन हुन्छ । आफैंमा भएको प्रेम दीर्घकालीन हुन्छ । हाम्रो समयमा मागी, प्रेम र भागी विवाहको प्रचलन थियो । अहिलेपनि त्यही तीन विवाह पद्धति नै चलिरहेको छ । मेरो बिचारमा मागी विवाहको तुलनामा भागी र प्रेम विवाहहरु कमजोर हुनुको कारण पनि त्यही हो । प्रेम विवाहमा धेरैले प्रेम देखाउनको लागि गर्छन् । मानिसलाई तत्काल परिणाम चाहिन्छ । तर, मागी विवाहमा विवाह पछिको प्रेम हुन्छ । त्यसमा दीर्घकालीन प्रेमको विजारोपण हुन्छ । प्रेमकाबीच शंका र बेमेल : हाम्रो बीचमा प्रगाढ रुपमा प्रेम त थियो नै । त्यत्तिकै शंका र बेमेल पनि कहिलेकाहीँ एकअर्काको मनमा आउने गर्दथ्यो । दुबै जवान थियौं । एउटाले अर्काेलाई हेर्दा पनि शंका गर्न मन लागि हाल्थ्यो । हामी त्यत्तिकुरालाई लिएर पनि सामान्य मनमुटाव ग
रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि फेसबुकमार्फत आक्रोस व्यक्त गरेका छन्। बुधबार भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नाम लिएर असन्तुष्ट जनाएका हुन्। उनले आफूलाई स्पष्टीकरण लिन र पदबाट बर्खास्त गर्न मुख्य रुपमा प्रचण्ड र माधव नेपालको भीषण दवाब रहेको दाबी गरेका छन्। ‘मलाइ स्पष्टीकरण लिन र पदबाट बर्खास्त गर्न मुख्य रुपमा प्रचण्ड र माधव नेपालको भीषण दवाब रहेछ।’ उनले भनेका छन् , ‘गुरु भट्टराई देखेर तीन कान्ला हाम्फानेहरुले यो देश बनाउँछन् भनेर कल्पना गर्नु? म लाखौंको जागिर छोडेर ५० हजारको जागिर खान बाध्यताले आएको हो। त्यो ब
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सरकारले वैकल्पिक बाटो दिए प्राधिकरण छाड्न तयार भएको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शाक्यले आफूलाई वैकल्पिक बाटो दिएर उचित ठाँउमा पठाए जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने बताए । उनले आफूलाई राजीनामा दिन कसैले पनि नभनेको तर, अरु कुनै जिम्मेवारी दिन सकिन्छ कि भनेर उर्जामन्त्रीले सोधेको जानकारी दिए । आफूले राम्रो काम गरिरहेकाले जिम्मेवारीविहीन गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । त्यस्तै शाक्यले आफूले प्राधिकरणलाई अघि बढाउन धेरै काम गरेको दाबी गरे । कोरोनाको जोखिमका बाबजुद् पनि प्राधिकरणले सुधारात्मक काम गरेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शाक्यले राजीनामा दिन निर्देशन दिँदै उनको ठाउँमा यसअघिका कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई निर्देशन दिएका
गर्मीमा श्रम गर्नेहरुको शुक्रकीटमा ह्रास आएको खबर आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ ।खाडीबाट फर्कने २०प्रतिशतपुरुषहरुमा शुक्रकीटको गुण र संख्यामा ह्रास आएको परीक्षणहरुले देखाएका छन् ।समाचार अनुसार कतार साउदी अरब र मलेसियामा काम गरी फर्केका युवा र तिनका पत्नी परामर्श तथा उपचारका लागि अस्पताल एवं निःसन्तान केन्द्रमा धाउने गरेका छन्।हरेक प्रजनन योग्य पुरुक्षमाऔसत प्रतिमिलिलिटर दुई करोडभन्दा बढी शुक्रकीट हुनुपर्छ। अन्नपूर्ण लेख्छ– खाडी मुलुकमा काम गरी फर्केका १५ देखि २० प्रतिशत पुरुषमा त्योभन्दा कम संख्यामा शुक्रकीट देखिएको छ। यी हुन् शुक्रकिट मार्ने र पुरुषलाई बाँझो बनाउन सक्ने चिजहरु के तपाइँले निकै कसिलो पेन्टी लगाउनुहुन्छ ।चाउमिन खाँदा सोयाको सस बढि नै खानुहुन्छ अनि काखमा ल्यापटप राखेर लामै समय चलाउनुहुन्छ ? खबरदार, यदि यसो गरिरहनुभएको छ भने तपाइँले थाहा नपाइकनै आफ्नो पुरुषत्व कमजोर ब
जब स्वास्थ्यको प्रसंग आउँछ, जान्नेबुझ्नेहरु भन्छन्, ‘मासुजन्य परिकार भन्दा शाकाहार परिकार ठीक हुन्छ ।’ अझ कतिपय रोगमा त रातो मासुलाई बन्देज नै गरिन्छ । तर, माछामा भने यस्तो भेद छैन । यो धेरै गुणकारी हुन्छ, शारीरिक र मानसिक स्वस्थ्यका लागि । बच्चाको मस्तिष्क विकास गर्न होस् वा गर्भावस्थमा स्वस्थ्य रहन नै, माछाको सेवन उपयोगी मानिन्छ । कसरी ? : माछा ओमेगा-३ फ्याटी एसिडको एकदमै राम्रो स्रोत हो । यो स्वस्थ शरीर, मानसिक विकास तथा स्वस्थ्य मुटुका लागि लाभदायक मानिन्छ । माछा प्रोटिनयुक्त हुनुका साथै यसमा चिल्लोपना कम हुन्छ । स्वस्थ्य शरीरको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पौष्टिक तत्व माछामा पाइन्छ । त्यसैले, हप्तामा दुई दिन माछाको सेवन पनि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । के-के छ त फाइदा ? : मुटुका लागि लाभदायक– माछामा पाइने पैटी एसिड मुटुको लागि राम्रो मानिन्छ । यसमा फैटको माछा कम हुन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई ठाडो निर्देशन दिएका छन् । आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न भुसाललाई निर्देशन दिएको देउवाको सचिवालयले जनाएको छ । झण्डै एक वर्षअघि कार्यकाल पुरा भएपछि तत्कालीन केपी ओली सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी बनाएर लगेको थियो । उनको काम सन्तोषजनक नभएको ठहर सहित देउवा सरकारले उनलाई हटाउने तयारी थालेको हो । दैनिक १४ घण्टे लोडसेडिङ अन्त्य गरेर जनतामाझ लोकप्रिय बनेका कुलमानले चार वर्षे अवधिमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुका साथै प्राधिकरणको साख उचो पारेका थिए । त्यतिबेलै उनको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएपनि ओली सरकारले नियुक्ति दिएको थिएन ।तत्कालिन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा २०७३ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपानिकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) ले आज काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य विश्वविदालयमा भैरहेको शैक्षिक विकृतिविरुद्ध प्रदर्शन नाम दिईएको प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुले एमफील र पिएचडीमा गरिएको शुल्क वृद्धि खारेज गर्नुपर्ने, ७७ वटै जिल्लामा आंगिक क्याम्पस विस्तार गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको संरक्षण गर, मेडिकल कलेजलगायत असंवैधानिक प्रक्रियाले सम्बन्धन दिने काम बन्द गर लगायतका माग अघि सारेका छन् । विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उपत्यका क्याम्पस कमिटी ईन्चार्ज तारा सञ्जेलले एमसीसी कुनैपनि हालतमा संसद्बाट पारित गर्न नहुने धारणा राखिन् । उनले एमसीसी पास गर्ने नेताहरुको हातमात्रै होईन गर्धनपनि छिनाईने चेतावनी दिएकी छिन् ।